Fomba fiasa ny "tena-destruct" | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Fomba fiasa ny "tena-destruct"
Posted in andriamanitra . isika
Izany matetika eo amin'ny fiainana mananontanona eo anoloan'ny masonao?
Mitaky ihany minitra vitsy, ary mijery tele ny hiampangany ny sôkôla ao aminareo miezaka nifanizina be dia be ny zavatra, "sokola". ary, raha toa ianao ka saro-pady olona, ary ny hisarika ny saina tsy misy ilaina ny handrava ny orona, raha mbola ianao miezaka ho tia ny olona toy izany, araka ny soso-kevitra tao amin'ny fahitalavitra - ny "sôkôla," ianao te-be. Ary mampitombo ny fihetseham-po fa na dia ny faniriana ny ho "tsara", Ponenana izay efa nikarakara mialoha, raha, mazava ho azy, ny mpanapaka dia tsy tanteraka adala
ary ianareo, rehetra izany ady ho an'ny fahamarinana, mandeha, mandinika ny molony, hanakimpy ny masony, fanararaotana sy ny manome tsiny ny tenany noho ny, fa toy izany no teraka faniriana. Ary dia toy izany no mandoro ny sisa tsy rava angovo, misy ny. Plus ianao ihany no ao ambadiky ny latsa nataon'izay ny tsy fahombiazana eo amin'ny ampahany ireo izay mankamamy.
Eny Arahabaina. Ianao dia mendrika ny solontenan'ny rafitra, sorona ny ainy noho ny "sy ny fampandrosoana ny fisian'ny" ny, dia tsy azo atao na dia ny rantsan mikasika. Ny tena mpanohana ny zava-poana …
fototra tsara Tsy mampiaiky sy ny fahambonian'ny over hampitony.
olana izay? — pihetseham-po.
izay fihetseham-po? — Eo amin'ny sehatra ara-tsaina.
Eo amin'ny sehatra ara-tsaina izay? — Fifanenjanana ny mamantatra ny hoavy angovo.
Noho izany dia mila mandinika ny angovo fanjakana.
Mba mampiasa ny fototry ny fomba fijery, misy ary nianatra tsara ho antsika, vatana angovo, ary ny mifandray chakras. toy izany, Malagasy "raschakrovka»:
Eny ary, araka izay? Toa - tsara tarehy ))) teny an-dalana, iza no mahalala? Eo amin'ny anankiray toy ny misaintsaina ny namana?
Ny mahazatra ny angovo mikoriana: mivoaka avy ao amin'ny toerana iray ka mandeha hafa. Araka ny hita ao amin'ny Sary.
Ao tamintsika:, cosmic angovo manome eto an-tany. Izy mandeha any amin'ny tongony, manao kosa manerana ny chakras mba, ary indray mandeha amin'ny alalan'ny hery amin'ny lamosin'ny ny lohany. toy izany, raha simplistically.
Ary raha tsipiriany bebe kokoa - ny…
Mandeha mamaky ny angovo foibe (chakra) Information amin'ny endrika angovo (cosmic Angovo) vidoizmenyaetsya, aboutAndriamanitraschayas izy fitiavana, izay isika in izany vola, ary delee mandeha toerana, mitondra ny vaovao ao amin'ny izao tontolo izao ny alalan 'izay nandeha. ary toerana, mifototra amin'ny vaovao ity, manao fanapahan-kevitra, fa tsy fampindramam intsony angovo haniraka aiza.
A ohatra tsotra: raha ny angovo dia nihazona tamin'ny iray amin'ireo chakras, tsy mandeha lavitra kokoa - ny voalohany ny ezaka mampifandanja ny, ary, raha ilaina, incapacitate. Arakaraka ny haavon'ny fifandraisana sy ny votoatiny ny fisainana zavaboary izany mety hitranga ao an-angovo, ara-tsaina, na biolojika anivon'ny, na eo amin'ny ambaratonga rehetra indray mandeha. More izany amin'ny teny tsotra dia afaka milaza Sergey Lazarev ary "Diagnostics karma".
Diniho ny chakras. Ary izany dia hanampy antsika sy Alex Space "Tibetana Fitsaboana». toy izany, manomboka avy ambany:
fiainana. Fiovam-po Energy marokoroko endrika (biolojika sakafo, herisetra) in vidoizmenennuyu toerana.
fandikana. Toy izany koa no dingana eo anivon'ny firaisana ara-nofo.
fanatanjahan-tena. Mahazo fahafaham-po avy amin'ny fanatanjahan-tena sy ny zavatra.
fitiavana (fitiavana ny mpiara-belona). Ny fianakaviana ny fahafahana hiaina sy manao fifandraisana ara-tsosialy, ary hahatsapa izany fitiavana.
Famoronana zavakanto sy ny fahafahana manome hery ny famoronana drafitra.
fahafantarana ny zava-misy, zava-bitany ny tanjona, fihodinana hevitra (fahefana, probivnaya).
Tsirairay ny fidirana amin'ny avy amin'Andriamanitra ambaratonga. nifandray tontolo izao voarindra, fiovana zava-misy, zavaboary tontolo.
Jereo ny manodidina. Misy roa "mahazatra": fiainana (ny voalohany chakra) ary miteraka (faharoa chakra). eny ambony (pokazushnom) mihitsy "hiady" ho an'ny fiainana, ary "fanohanana" fampielezana. Ary mifanaraka amin'izany Izao Rehetra Izao miaraka amin'ny. Mazava ho azy fa ny hafa ny angovo voasakana. Ary izao no tsy tratra ny fahatsapana ny vita. Ary mifehy ny angovo ampiasaina andrim-panjakana foibe-pahefana.
Fiainana sy ny fahasalamana. Ary ny anjara-raharaha momba ny "Medical Institute"
Firaisana ara-nofo sy ny miteraka. Eo ambany fiahian'ny ny "trano-bahoaka". Raha any "brothels" Voarara - misy ny mpanatanteraka vatana mba hanampy hanorina raharaham-barotra "mampisalasala" rafitra. Ary raha nampiasa fitaka sy ny fomba fandaminana contrivances.
Fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahan-tena ny fikambanana niaraka taminy. Ary ho an'ny tanora tsikelikely rehefa nijery ny tanora ny fiaraha-monina.
olombelona fitiavana teo ambany fitarihan'i "saropady" andrim-panjakana ny fianakaviana.
Dia, hitily famoronana "ny Institute of Education", "Science Academy", "Poetika-Skulptorskimi fikambanana".
Fametrahana drafitra sy ny "Business World" eo ambany fanitsiana mahay "hetra maso".
Ary ny kalitaon'ny fifandraisana Andriamanitra dia tsy maintsy mamaly ny "Institute of the Church". (tena mampihomehy).
Chakra tsirairay dia azo zaraina ho fito podchakr, izay manana fananana toy izany koa ny fototra chakras ao anatin'ny chakras, izay.
Diniho, ohatra, ny voalohany sy ny sakafo chakra fomba izay izany no tompon'andraikitra.
cosmic Angovo namatsy hanina, ary ny fiankinan-doha eo amin'ny fanjakana sy ny fihetseham-po ara-tsaina, fahatsiarovan-tena za-draharaha raha, izy (cosmic Angovo) mahazo loko, ary mazàna ny loko chakra, izay nanome alokaloka, mandalo mandalo chakras sy mahazo lafiny fanampiny, na manatanjaka misy. izany hoe. raha mihinana amin'ny Popyhi mafy sy haingana, ary mieritreritra tamin'izany andro izany ny rehetra mba, mikatsaka ny hanafainganana ny fomba - dia tsy ho ela indray te-hihinana, TK. angovo lasa miloko mena (alokaloka voalohany chakra), ary manolo ny biby ambony. Toy izany koa ao amin'ny angovo hafa rehetra foibe.
Raha toa, na izany aza, mankafy ny sakafo, prosmakovat izany, mahazo fahafaham-po avy amin'izy io, ary mba hanatanterahana izany fahatsapana vita - angovo bidets efa miezaka ny fahafito chakra, ary toy izany koa nahazo alokaloka eo amin'ny chakras mandalo manome azy ihany no valin-, izany hoe. hanamafy orina ny. Noho izany, amin'ny fivavahana sy ny fampianarana samy hafa no nanolorana alohan'ny sakafo mba hivavaka, tony, mba hahazoana ny firaisan-kina amin'ny natiora. ary, fandraisana satro-boninahitra - ny hipetraka eo amin'ny latabatra. Ary ny mpianakavy rehetra dia afaka hiomana ho amin'ny fananganan'anaka amin'ny ny sakafo teo amin'ny latabatra, zava-dehibe, fa tsy hivadika ho ny endrika ivelany isehoan'ny (amin'ny toe-javatra toy izany fa tsara ny mijanona ho folo minitra).
Eritrereto àry izany: dia matetika isika no mahatsapa?
Tsy sarotra ny mahita, fa dia miompana amin'ny sakafo sy firaisana ara-nofo, na dia isika dia manao ny asan'ny, fametrahana hevitra, fikarohana asa, Miezaka isika ny hahazo ny fahendrena amin'ny fivavahana, na, na dia, rehefa miezaka manandrana ny sakafo Gourmet (Amin'ny ankapobeny dia sahisahy:TK. Izany no ambaratonga fahatelo ny halalin 'ny rafitra). Plus izany koa Hameno iray amin'ny fitanana ninia batana sasany fihetseham (Afaka mangataka na inona na inona izay manam-pahefana no tompon'andraikitra chakra, ary eritrereto hoe inona faritra amin'ny vatana mivantana na ankolaka mandrisika. Koa concentrates ny angovo ao amin'ny mifandraika chakras), ary dehibe noho ny fitotonganan'ny ny fiainana ao amin'ny lafiny ara-bola sy ara-toekarena. Iza kosa mitarika ny saina amin'izao tontolo izao ny fihetseham eo amin'ny sehatry ny afa-po ny fanirian-.
no fanafody hanasitranana.
Na inona na inona ny Fetsy-namorona rafitra nisy foana ny tena am-boalohany no fanafody hanasitranana. Amin'ny dingana rehetra eo amin'ny fiainana dia ilaina mba hahazoana vita ny fihetseham, mankafy ny dingana. iray tanteraka vahaolana matanjaka ary zava-dehibe kokoa noho ny tsy manam-petra maro tsininy. izany hoe. mahatsapa avy amin'Andriamanitra
Tiako - tso-po ny ankizy ny fahatsapana ny fifaliana.